Sinokuhlala Njani ‘Sinesimo Sengqondo Sokulinda’? | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
‘Ndiza kubonisa isimo sengqondo sokulinda.’—MIKA 7:7.
Yintoni esinokuyifunda kumzekelo kaMika?
Ziziphi iziganeko esizilindeleyo?
Ziziphi ezinye iindlela esinokubonisa ngazo ukuba sinombulelo ngomonde anawo uYehova?
1. Yintoni enokusenza siphelelwe ngumonde?
UKUMISELWA koBukumkani bukaMesiya ngo-1914, kwaye kwathetha ukuba zibaliwe iintsuku zale nkqubo kaSathana. Ngenxa yemfazwe eyaliwa ezulwini, uYesu wamphosela phantsi emhlabeni uMtyholi needemon zakhe. (Funda iSityhilelo 12:7-9.) USathana uyazi kakuhle into yokuba “ixesha analo lifutshane.” (ISityhi. 12:12) Noko ke, sekuqengqeleke amashumi eminyaka sikwelo ‘xesha lifutshane,’ yaye bambi basenokuvakalelwa kukuba liye latsala gqitha. Njengokuba silindele ukuba uYehova angenelele, ngaba nathi sele siphelelwe ngumonde?
2. Yiyiphi imibuzo eza kuphendulwa leli nqaku?
2 Ukungabi namonde kunokuba yingozi, kuba kunokusenza sidyuduzele. Yintoni enokusinceda sihlale sinesimo sengqondo sokulinda? Siza kuncedwa leli nqaku kuba liza kusiphendula kule mibuzo. (1) Yintoni esinokuyifunda ngokuba nomonde kumzekelo womprofeti uMika? (2) Ziziphi iziganeko esiza kusibona ngazo isiphelo sale nkqubo? (3) Singawubonisa njani umbulelo ngokuba nomonde kukaYehova?
SIFUNDA NTONI KUMZEKELO KAMIKA?
3. Yayinjani imeko kwaSirayeli ngomhla kaMika?
3 Funda uMika 7:2-6. Umprofeti kaYehova uMika wazibonela ngokwakhe ukuphela kolwalamano lwamaSirayeli noThixo de imeko yamandundu ngakumbi xa kwakulawula uKumkani uAhazi ongendawo. UMika ufanisa amaSirayeli angathembekanga ‘nekhakakhaka’ kunye ‘nothango lwameva.’ Kanye njengokuba ikhakakhaka okanye uthango lwameva lumenzakalisa nabani na ohamba kulo, loo maSirayeli onakeleyo ayemonakalisa nabani na onento yokwenza nawo. Le meko yaba mandundu kangangokuba oku konakala kwangena nasezintsatsheni. Eqonda ukuba loo meko yayingaphaya kwamandla akhe, uMika waphalaza imbilini yakhe kuYehova. Emva koko walindela ngomonde kuThixo. UMika wayeqinisekile ukuba uYehova uza kuyilungisa loo meko ngexesha lakhe elifanelekileyo.
4. Bubuphi ubunzima esijamelana nabo?
4 NjengoMika, nathi siphila phakathi kwabantu abazingcayo. Abaninzi ‘abanambulelo, abanyanisekanga, abanawo umsa wemvelo.’ (2 Tim. 3:2, 3) Siye sikhathazeke gqitha xa abo sisebenza nabo, esifunda nabo kunye nabamelwane bethu bengenaxesha lomnye umntu. Noko ke, abanye abakhonzi bakaThixo bajamelene neengxaki ezingakumbi. UYesu wathi abalandeli bakhe babeza kuchaswa ziintsapho zabo, waza wasebenzisa amazwi afanayo nalawo akuMika 7:6 ukuchaza igalelo esasiza kuba nalo isigidimi sakhe. Wathi: “Ndize kwahlukanisa indoda noyise, intombi nonina, umfazana noninazala. Eneneni, iintshaba zomntu ziya kuba ngabantu bendlu yakhe.” (Mat. 10:35, 36) Akukho nto inzima njengokunyamezela ukugculelwa nokuchaswa ngamalungu entsapho angalufuniyo ukholo lwethu! Ukuba sikwimeko enjalo, ngamana nathi singangaze sinikezele. Kunoko, simele silwele ukuhlala sinyanisekile ngoxa silindele ngomonde kuYehova ukuba alungise imicimbi. Ukuba sisoloko simcela ukuba asincede, uya kusomeleza aze asinike ubulumko obufunekayo ukuze sinyamezele.
5, 6. UYehova wamvuza njani uMika, kodwa yintoni awafa engayibonanga uMika?
5 UYehova wamvuza uMika ngokuba nomonde kwakhe. UMika wazibonela ukuwa kukaKumkani uAhazi nolawulo lwakhe olungendawo. Wazibonela ukubekwa etroneni konyana ka-Ahazi olungileyo, uKumkani uHezekiya nokuvuselelwa konqulo olunyulu. Nesigidimi somgwebo esakhutshwa nguYehova nxamnye neSamariya esebenzisa uMika sazaliseka xa iAsiriya yahlasela ubukumkani basemantla bakwaSirayeli.—Mika 1:6.
6 Noko ke, uMika akazange azibone zonke iziganeko zokuzaliseka kwezo ziprofeto wayephefumlelwe ukuba azibhale nguYehova. Ngokomzekelo, uMika wathi: “Kuya kuthi ke ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova imiselwe ngokuqinileyo encotsheni yeentaba, yaye ngokuqinisekileyo iya kuphakanyiswa ngaphezu kweenduli; kwaye zonke izizwana zimele zibe ngumsinga ukuya kuyo. Ngokuqinisekileyo iintlanga ezininzi ziya kuhamba zize zithi: ‘Yizani, masinyuke siye entabeni kaYehova.’ ” (Mika 4:1, 2) UMika wafa ngaphambi kokuba eso siprofeto sizaliseke. Sekunjalo, wayezimisele ukuhlala enyanisekile kuYehova de kuse ekufeni, kungakhathaliseki ukuba yintoni eyenziwa ngabanye. Kule nkalo, uMika wathi: “Zonke izizwana ziya kuhamba ngasinye egameni lothixo waso; kodwa thina siya kuhamba egameni likaYehova uThixo wethu ukusa kwixesha elingenammiselo, ewe ngonaphakade.” (Mika 4:5) UMika wakwazi ukulinda ngomonde kulo lonke elo xesha lokubandezeleka kuba wayeqinisekile ukuba uYehova wayeza kuzizalisekisa zonke izithembiso Zakhe. Lo mprofeti uthembekileyo wayethembele kuYehova.
7, 8. (a) Ziziphi izizathu esinazo zokumthemba uYehova? (b) Yintoni eya kusinceda singaliva tu ixesha eliseleyo?
7 Ngaba nathi sinentembelo efanayo? Zininzi izizathu zokuba simthembe ngolo hlobo. Siye sazibonela ukuzaliseka kwesiprofeto sikaMika. “Ekupheleni kwemihla,” izigidi zabantu beentlanga, izizwana neelwimi zonke ziye zathontelana ukuya ‘kwintaba yendlu kaYehova.’ Nakuba bephuma phakathi kwezizwe ezilwayo, aba banquli baye bawakhanda ‘amakrele abo aba ngamakhuba,’ yaye abafuni kuva kwanto ‘ngokufunda imfazwe kwakhona.’ (Mika 4:3) Alikho ilungelo elifana neli sinalo, lokuba phakathi kwabantu bakaYehova abahleli kunye ngoxolo!
8 Siyaqondakala isizathu sokuba sifuna uYehova ayiphelise ngokukhawuleza le nkqubo ingendawo. Noko ke, ukuze sikwazi ukulinda ngomonde, simele sijonge izinto ngendlela uYehova azijonga ngayo. Umise umhla aza kulugweba ngayo uluntu esebenzisa uYesu Kristu, ‘indoda ayimiseleyo.’ (IZe. 17:31) Kodwa ke, ngaphambi kokuba enze oko, uThixo unike zonke iintlobo zabantu ithuba lokufumana ‘ulwazi oluchanileyo lwenyaniso,’ ukuze emva kokulufumana benze izinto eziya kwenza basindiswe. Ubomi obuxabisekileyo babantu busemngciphekweni. (Funda eyoku-1 kuTimoti 2:3, 4.) Ukuba sixakekile sinceda abanye bafumane ulwazi oluchanileyo ngoThixo, asiyi kuliva tu eli xesha liseleyo ngaphambi kokuba kufike umgwebo kaYehova. Sekumbovu liphele eli xesha, ibe lisenokufika ngephanyazo. Xa sele liphelile, siya kuvuya gqitha yinto yokuba siye salisebenzisa kakuhle ekushumayeleni ngoBukumkani!
ZIZIPHI IZIGANEKO EZIBONISA UKUFIKA KWESIPHELO?
9-11. Ngaba sele ezalisekile amazwi akweyoku-1 kwabaseTesalonika 5:3? Cacisa.
9 Funda eyoku-1 kwabaseTesalonika 5:1-3. Iintlanga sele ziza kubhengeza zisithi “Luxolo nonqabiseko!” Kufuneka ‘sihlale siphaphile, sithe qwa’ ukuze singabanjiswa sesi sibhengezo. (1 Tes. 5:6) Ukuze sikwazi ukuhlala siphaphile, makhe siqwalasele ngokufutshane iziganeko ezihlahl’ indlela yesi sibhengezo.
10 Emva kwemfazwe nganye kwiimfazwe zehlabathi ezimbini, izizwe ziye zavakalisa uxolo. Emva kwemfazwe yehlabathi yokuqala, kwasekwa uManyano Lwezizwe ngethemba lokuzisa uxolo. Kwandula ke, emva kwemfazwe yehlabathi yesibini kwasekwa iZizwe Ezimanyeneyo ngenjongo efanayo yokuzisa uxolo kulo mhlaba. Iinkokeli zoorhulumente nezonqulo zaye zathembela kule mibutho ukuzisa uxolo. Ngokomzekelo, iZizwe Ezimanyeneyo zabhengeza u-1986 njengoNyaka Woxolo Wezizwe Ngezizwe. Kuloo nyaka, iinkokeli zamazwe ngamazwe nezonqulo zaya kudibana nentloko yamaKatolika eAssisi, eItali kuthandazelwa uxolo.
11 Noko ke, eso sibhengezo soxolo nonqabiseko nezinye ezifana naso azikasizalisekisi isiprofeto esikweyoku-1 kwabaseTesalonika 5:3. Kutheni sisitsho nje? Kaloku ayikafiki “intshabalalo yequbuliso.”
12. Yintoni esiyaziyo ngesibhengezo ‘Soxolo nonqabiseko’?
12 Ngubani oza kwenza esi sibhengezo ‘Soxolo nonqabiseko’? Yiyiphi indima eza kudlalwa ziinkokeli zeNgqobhoko nezezinye iicawa? Zona iinkokeli zoorhulumente ziza kubandakanyeka njani kuso? IZibhalo azisixeleli. Ekuphela kwento esiyaziyo kukuba, kungakhathaliseki ukuba senziwa njani na okanye abantu basikholelwa kangakanani na, siya kuba lilize. Le nkqubo yezinto iya kube isalawulwa nguSathana. Ibole bhutyu yonke akukho kwandawo ikhethekayo. Ibiya kuba lusizi olungathethekiyo ukuba kubekho nabani na okholelwa obo buvuvu bukaSathana aze azibandakanye kwimicimbi yehlabathi!
13. Iingelosi ziyibambele ntoni imimoya yentshabalalo?
13 Funda iSityhilelo 7:1-4. Ngoxa silindele ukuzaliseka kweyoku-1 kwabaseTesalonika 5:3, kukho iingelosi ezinamandla ezibambe imimoya yentshabalalo yembandezelo enkulu. Yintoni le ziyilindileyo? Esinye isiganeko sichazwa ngumpostile uYohane ngokuthi, kukutywinwa kokugqibela ‘kwamakhoboka oThixo wethu’ athanjisiweyo. * Emva kokutywinwa kokugqibela kwala makhoboka, ezi ngelosi ziza kuyikhulula imimoya yentshabalalo. Yintoni eza kulandela emva koko?
14. Ziziphi iimpawu ezibonisa ukuba sikufuphi isiphelo seBhabhiloni Enkulu?
14 IBhabhiloni Enkulu, ubukumkani behlabathi bonqulo lobuxoki, iya kufumana umgwebo oyifaneleyo. “Izizwana nezihlwele neentlanga” aziyi kukwazi ukulixhasa. Kwangoku sekukho iimpawu ezibonisa ukuba isiphelo sayo sikufuphi. (ISityhi. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Enyanisweni, into yokuba ayisenabalandeli ibonakala kumajelo eendaba, apho unqulo neenkokeli zalo ziya zihlaselwa ngamandla. Kuyo yonke loo nto, iinkokeli zeBhabhiloni Enkulu aziyiboni ingozi ezikuyo. Kanti ke, zizibhudile izingqi! Emva kwesi sibhengezo ‘Soxolo nonqabiseko!’ iinkokeli zopolitiko zale nkqubo kaSathana ziya kuthi zingabhungisanga zilujikele unqulo lobuxoki zize zilutshabalalise. Ayinakuze iphinde ibonwe nangetshengele iBhabhiloni Enkulu! Siya kuvuya gqitha ngenxa yokuba siye sazilindela ngomonde iziganeko ezinjalo.—ISityhi. 18:8, 10.
SINGABONISA NJANI UKUBA SIYAWUBULELA UMONDE KATHIXO?
15. Kutheni uYehova engakhange akhawuleze agwebe abantu?
15 Phezu kwalo nje ugculelo oluziswa ngabantu kwigama lakhe, uYehova uye walinda ngomonde de kube lixesha lakhe elifanelekileyo. UYehova akafuni kutshabalale namnye kwabo bantliziyo zinyanisekileyo. (2 Pet. 3:9, 10) Ngaba nathi sivakalelwa ngolo hlobo? Ngaphambi kokuba ifike imini kaYehova, simele sibonise umbulelo esinawo ngenxa yomonde wakhe ngezi ndlela zilandelalyo.
16, 17. (a) Kutheni simele sizame ukubanceda abo bapholileyo? (b) Kutheni kungxamisekile nje ukuba abo bapholileyo babuyele kuYehova?
16 Nceda abo baye baphola. UYesu wathi kubakho uvuyo ezulwini ngenxa yemvu nje enye eye yafunyanwa. (Mat. 18:14; Luka 15:3-7) Kucacile ukuba, uYehova ubaxhalabele gqitha bonke abo baye babonisa ukuba bayalithanda igama lakhe, nakuba besenokuba basapholile okwangoku. Xa sibanceda babuyele ebandleni, sibangela ukuba uYehova neengelosi bavuye.
17 Ngaba uphakathi kwabo bapholileyo, abayekelele umxakatho ekukhonzeni uThixo? Mhlawumbi wakhutyekiswa ngumntu othile ebandleni waza wayeka ukunxulumana nentlangano kaYehova. Ekubeni sekudlule ixesha ngoku, khawuzibuze oku: ‘Ngaba ubomi bam buye babhetele, ndatsho ndonwaba ngakumbi? Ngaba nguYehova owandikhubekisayo, okanye yayingumntu nje ongafezekanga? Ngaba ikho into awakha wayenza uYehova ukuze andenzakalise?’ Inyaniso kukuba, usoloko esenza okulungileyo kuthi. Kwanokuba sesiyityeshele into yokuba sazahlulela kuye, uyasivumela sixhamle izinto ezilungileyo azilungiselela abantu. (Yak. 1:16, 17) Sekumbovu ifike imini kaYehova. Ngoku lixesha lokuba sibuyele kuBawo wethu wasezulwini onothando nasebandleni—ekuphela kwendawo ekhuselekileyo kule mihla yokugqibela.—Dut. 33:27; Heb. 10:24, 25.
Abantu bakaYehova benza konke okusemandleni ukuze bancede abapholileyo babuyele kuYehova (Funda isiqendu 16, 17)
18. Kutheni simele sibaxhase nje abo bakhokelayo?
18 Ukubaxhasa ngokunyaniseka abo bakhokelayo. NjengoMalusi onothando, uYehova uyasalathisa aze asikhokele. Uye wamisela uNyana wakhe waba nguMalusi Oyintloko. (1 Pet. 5:4) Abadala abakumabandla angaphezu kwe-100 000 bachitha ixesha ukuze baluse imvu nganye kaThixo. (IZe. 20:28) Xa sibaxhasa ngokunyaniseka abo bamiselwe ukuba bakhokele, sibonisa umbulelo esinawo kuYehova noYesu ngenxa yako konke oko baye basenzela kona.
19. Singenza njani ukuze sisondelelane?
19 Sondelelanani. Kuthetha ukuthini ukusondelelana? Xa umkhosi onamava uhlaselwa lutshaba, amajoni aye asondelelane. Xa esondelelana, akha udonga oluluqilima. USathana uya esiba nochatha ekuhlaseleni abantu bakaThixo. Eli asiloxesha lokube sikruthakruthana, sisilwa sedwa. Lixesha lokusondelelana sibe yimbumba, silibale ngokungafezeki kwabanye size sibonise ukuba sithembele kukhokelo lukaYehova.
Eli lixesha lokuba sisondelelane ukuze silwe noMtyholi needemon (Funda isiqendu 19)
20. Yintoni esimele siyenze ngoku?
20 Ngamana sonke singahlala siluphaphele ulwalamano lwethu noThixo size silindele kuye. Masilindele ngomonde isibhengezo ‘Soxolo nonqabiseko!’ nokutywinwa kokugqibela kwabanyuliweyo. Emva koko, iingelosi ezine ziya kuvulela imimoya yentshabalalo, eya kutshabalalisa iBhabhiloni Enkulu. Ngoxa silindele ezi ziganeko zibangela umdla, simele sithobele ulwalathiso esilunikwa ngabo bamiselweyo ukuba bakhokele kwintlangano kaYehova. Masisondelelane ukuze silwe noMtyholi needemon! Eli lixesha lokuthobela isibongozo somdumisi esithi: “Yibani nesibindi, yaye ngamana iintliziyo zenu zingomelela, nonke nina balindela kuYehova.”—INdu. 31:24.
^ isiqe. 13 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngomahluko phakathi kokutywinwa kokuqala nokwesibini kwabathanjiswa, funda iMboniselo kaJanuwari 1, 2007, iphepha 30-31.